Zimbabwean President elect Emmerson Mnangagwa smiles while addressing a press conference in Harare ,Friday, Aug, 3, 2018. Zimbabwe's president says people are free to approach the courts if they have issues with the results of Monday's election, which he carried with just over 50 percent of the vote. President Emmerson Mnangagwa spoke to journalists shortly after opposition leader Nelson Chamisa called the election results manipulated and said they would be challenged in court. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President elect Emmerson Mnangagwa addresses a press conference in Harare, Friday, Aug, 3, 2018. Zimbabwe's president says people are free to approach the courts if they have issues with the results of Monday's election, which he carried with just over 50 percent of the vote. President Emmerson Mnangagwa spoke to journalists shortly after opposition leader Nelson Chamisa called the election results manipulated and said they would be challenged in court. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Riot police break up a press conference by opposition leader Nelson Chamisa in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted the press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Zimbabwean President elect Emmerson Mnangagwa smiles after addressing a press conference in Harare ,Friday, Aug, 3, 2018. Zimbabwe's president says people are free to approach the courts if they have issues with the results of Monday's election, which he carried with just over 50 percent of the vote. President Emmerson Mnangagwa spoke to journalists shortly after opposition leader Nelson Chamisa called the election results manipulated and said they would be challenged in court. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Supporters watch from the street a press conference by opposition leader Nelson Chamisa gets underway in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted the press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Opposition leader Nelson Chamisa leaves the Bronte hotel following his press conference in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted the press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Riot police outside the Bronte hotel, where a press conference by opposition leader Nelson Chamisa was scheduled to take place, in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted a press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Commonwealth election observers take position on a rooftop as a press conference by opposition leader Nelson Chamisa gets underway in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted the press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Supporters of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa celebrate in Harare Friday, Aug, 3, 2018. Mnangagwa won an election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A supporter of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa celebrates in Harare, Friday, Aug, 3, 2018. Mnangagwa won an election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Supporters of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa celebrate in Harare, Friday, Aug, 3, 2018. Mnangagwa won an election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A ZANU-PF supporter celebrates the victory of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa at the conference center where the results were announced, in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Mnangagwa won election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Mujahid Safodien)
ZANU-PF supporters celebrate the victory of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa at the conference center where the results were announced, in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Mnangagwa won election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Mujahid Safodien)
ZANU-PF supporters celebrate the victory of Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa at the conference center where the results were announced in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Mnangagwa won election Friday with just over 50 percent of the ballots as the ruling party maintained control of the government in the first vote since the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Mujahid Safodien)
Riot police enters the Bronte hotel where a press conference by opposition leader Nelson Chamisa was scheduled to take place, in Harare, Zimbabwe, Friday Aug. 3, 2018. Hours after President Emmerson Mnangagwa was declared the winner of a tight election, riot police disrupted a press conference where opposition leader Nelson Chamisa was about to respond to the election results. (AP Photo/Jerome Delay)
Zimbabwean President elect Emmerson Mnangagwa,right, addresses a press conference in Harare ,Friday, Aug, 3, 2018. Zimbabwe's president says people are free to approach the courts if they have issues with the results of Monday's election, which he carried with just over 50 percent of the vote. President Emmerson Mnangagwa spoke to journalists shortly after opposition leader Nelson Chamisa called the election results manipulated and said they would be challenged in court. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)